Tera-ketotra ilay mpakasary, nisavoana ny môngôlifiera - Vaovao farany
Home / Madagascar / rallye montgolfière / tourisme / Tera-ketotra ilay mpakasary, nisavoana ny môngôlifiera
Tera-ketotra ilay mpakasary, nisavoana ny môngôlifiera
Seho hafakely sady mahatsikaiky ity nitranga tamin'ny hazakazaka Montgolfière ity.
Ho roa andro izao no nisidina teny amin'ny habakabak'i Gasikara ireto ballons montgolfières ireto, izany dia tafiditra indrindra amin'ny hetsika hanatsaràna ny fizahan-tany. Tao Antsirabe, teny amoron'Andraikiba no niainga izy ireo ka ihazo an'i Morondava...
Miparitaka be amin'ny tambazotra sosialy ny sary mikasika ity hetsika ity ary dia kanto dia kanto tokoa, anisan'izany io indraminay eo ambony io. Teo amin'ny ora faha-4 nisidinana no nitranga ity seho mahamenatra ny nanao azy ity, ary tsy nisy nahazo sary satria ny mpakasary no nanatontosa azy.
Raha nihorakoraka ny olona tery ambany rehefa nandalo tanàna iray ny môngôlifieran'ity mpakasary ity sy ny mpiaradia aminy dia somary nitsongoloka kely rangahy fa handeha hitifi-tsary ny vahoaka. Rehefa nahazo fiondrehana teo amin'ny 45° teo anefa ity mpakasary dia tsy tanany intsony fa nifandrombaka hivoaka ny rivotra tao amin'ny tsinay maintiny. Ankoatry ny fofona saika nahasafotra ny mpiaradia taminy (izay tsy nahita loatra izay haleha) dia nifandray tamin'ny hentona mampandeha ny môngôlifiera ny rivotra navoakany, ka nirehitra ary nanosika ny môngôlifiera hiakatra teo amin'ny dimy metatra teo ho eo. « Efa nampoiziko ihany e, nihinana tsaramaso vao maraina aho... vita izay vita ka hatao ahoana moa? Mitohy ny dia » hoy ity mpakasary izay niangavy tsy hotononina anarana.
Tafiditra ao anatin'ny avantiora daholo izany, ny hetotra rahateo « tsy fahotàna fa lamina kely ara-pahasalamàna ».
Sary © www.ultramagicexperience.com
Tera-ketotra ilay mpakasary, nisavoana ny môngôlifiera Reviewed on avril 22, 2016 Rating: 5
Madagascar X rallye montgolfière X tourisme